? ❝❝ ထူးမြတ်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွယ်တော်ဖူးမြှော်ဖို့ August လ ဟိုတယ်တည်း ခရီးစဉ် ❞❞ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Classifieds, Personal Ad. » ? ❝❝ ထူးမြတ်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွယ်တော်ဖူးမြှော်ဖို့ August လ ဟိုတယ်တည်း ခရီးစဉ် ❞❞
? ❝❝ ထူးမြတ်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွယ်တော်ဖူးမြှော်ဖို့ August လ ဟိုတယ်တည်း ခရီးစဉ် ❞❞
Posted by Shar Thet Man on Jul 6, 2016 in Classifieds, Personal Ad., Travel |3comments
? ❝❝ ထူးမြတ်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွယ်တော်ဖူးမြှော်ဖို့ August လ ဟိုတယ်တည်း ခရီးစဉ် ❞❞ ?
?? ❝❝ ခရီးစဉ် ထွက်ခွာမည့်ကာလ ❞❞ ??
?? ❝❝ ခရီးစဉ်အတွက်ကုန်ကျငွေ❞❞ – $ 1250 ??
??” ဖူးမြော်ပူဇော် မည့် နေရာများ ထဲမှ နေရာတစ်ချို့ ကို အကျဉ်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် “??
? အေးချမ်းသာယာလှသည့် ကန္ဒီမြို့နှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လက်ဝဲအောက် စွယ်တော်မြတ် နှင့် ကိန်းဝပ်စံပါယ်တော်မူရာ စွယ်တော်တိုက်။
?သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သို့ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ စတင်ရောက်ရှိခဲ့ရာ မဟိန္ဒလေတောင်
? သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးဂူ ဒမ္ဘူလ
? Polonnaruwa ဘုရင် တည်ခဲ့တော် ရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်သော Polonnaruwa
? 200 မီတာကျော်မြင့်မားသည့် ကျောက်တောင်ပေါ်တွင် နန်းတော်တည်ခဲ့သည့် စီဂရိယမြို့
? UNESCO ၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များစာရင်းဝင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ ရှေးဟောင်းမြို့တော် အနုရာဓပူရရှိ ရှေးဟောင်းလက်ရာ စေတီ၊ ပုထိုးများ
? ကိုလံဘိုမြို့ရှိ ကလျာဏီစေတီတော်၊ ရုပ်စုံဗုဒ္ဓကျောင်းတော်ကြီး နှင့် ဈေးဝယ်ယူနိုင်မည့် Shopping Mall များ
? သဘာဝတရား၏ လှပမှုများကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တောင်ပေါ်မြို့လေးဖြစ်သည့် လက်ဖက်စိုက်ခင်းများဖြင့်ကျော်ကြားသော နုဝရဧလိယ
? စတုတ္ထသံဃာယနာ တင်တော်မူခဲ့ရာ အာလုဝိဟာရလိုဏ်ဂူတော်
?” ခရီးစဉ်တွင်ပါဝန်သည့် ၀န်ဆောင်မူများ ”?
? ၀င်ကြေးများ။ ?
Shar Thet Man has written 234 post in this Website..
ဘုရားဖူးကိုတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမသွားချင်သေး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းက ဘုရားတွေတောင် စုံအောင် မဖူးနိုင်သေးလို့။
Shar Thet Man on ဝမ်​တိန်​အသွားလမ်း (ဝင့်​ပြုံးမြင့်​)
Shar Thet Man on ကဗျာစာအုပ်ပါးပါးအတွက် ဝေဖန်ခံစားမှုပါးပါး
Shar Thet Man on ဂိုးပေါ်ကြိုက်လို့ လောင်းထားပါတယ်
Shar Thet Man (64584 Kyats )
Foreign Resident (59891 Kyats )